Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn oo la dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn oo la dilay
Muqdisho (Keydmedia)-Niman aan la garanayn haybtooda oo ku hubaysnaa Bistoolado ayaa caawa Fiidkii waxa ay magaalada Muqdisho ku toogteen Allaha u naxariistee Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn ee magaalada Muqdisho Abuukar Max’ud Kadaf.
Dad goobjoogiyaal ahaa ayaa sheegay in dhowr Qof oo Bistoolado ku hubaysnaa islamrakaana Afka soo duubtay ay ku dileen Abuukar Max’ud Kadaf Afaafka hore ee laga galo gurigiisa oo ku yaalla degmada Wadajir ee gobolka Banadir.
Ehelada Marxuumka la dilay ayaa Warbaahinta Muqdisho u sheegay in Abuukar Max’ud Kadaf Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn uu ku geeriyooday goobta kadib markii ay rasaasta ka haleeshay dhinaca madaxa ,waxaana goobta lagu dilay ay dhowr Mitir u jirta Gurigiisa.
Kooxaha hubeysanaa ayaa markii dilka ay geesteen ayaa ka baxsaday Goobta.
Ciidamada Maamulka degmada Wadajir ayaa gaaray xaafadda uu dilka ka dhacay kuwaasi oo baaritaano la xariira dilka sameeyay, balse ay u suura gali weysay in ay gacanta ku dhigaan Kooxahaasi.
Ma cada ilaa hadda cidda ka danbaysa dilka Agaasimihii Idaacadii Somaliweyn Abuukar Max’ud Kadaf balse waa markii labaada oo Muddo ka yar Hal bil lagu dilo Degmada Wadajir Agaasiime idaacadeed,iyadoo ay xusid mudantahay in Xaafadda Nasteex bishii Janaayo 28 lagu dilay Agaasiimihii Idaacadda Shabelle Xasan Cabdi Cusmaan fantastic oo isna Salaadda Maqrib kadib ay rag hubaysan ku toogtay isagoo sii galaya Gurigiisa.